Bahamas nabatara Frontier Airlines ụgbọ elu ụgbọ elu na Nassau
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas nabatara Frontier Airlines ụgbọ elu ụgbọ elu na Nassau
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Bahamas nabatara Frontier Airlines gaa Nassau na Lynden Pindling International Airport
Bahamas nabatara ụgbọ elu nke Frontier Airlines ụnyaahụ na nnukwu obi ụtọ ka ọ rutere n'ọdụ ụgbọ elu mba Lynden Pindling. Frontier bụ onye mbụ na-ebu ọnụ na-efu dị ala ịbanye ahịa Caribbean na ọtụtụ ụbọchị njem kwa izu.
Frontier ga-arụ ọrụ ụgbọ elu si Miami International Airport (MIA) gaa Nassau (NAS) ugboro anọ n'izu, malite na July 2021.
Bahamas nọ n'okporo ụzọ nke mgbake ndị njem na mweghachi akụ na ụba na-esote ajọ ifufe na-ebibi ihe na ọrịa COVID-19.
Nnukwu mmụba nke ikuku elu sitere na isi ahịa ahịa dị ka isi ihe dị mkpa na atụmatụ nke ministri maka mgbake njem.
Ka njem na-aga n'ihu na nloghachi na-adịgide adịgide, Bahamas na-anụ ọkụ n'obi ịnabataghachi ndị ọbịa na nhọrọ ụgbọ elu ndị ọzọ na-eme n'oge okpomọkụ a. Frontier ga-arụ ọrụ ụgbọ elu si Miami International Airport (MIA) gaa Nassau (NAS) ugboro anọ n'izu, malite na July 2021.
N’emume nnabata na mgbanwe akara, Hon. Dionisio D'Aguilar, MP Minister of Tourism and Aviation, na-ekwu okwu na ụgbọ elu Frontier ụgbọ elu si Miami gaa Nassau. Foto sitere n'aka Kemuel Stubbs.
Mịnịsta njem na njem ụgbọ elu, bụ Hon. Dionisio D'Aguilar, so na ndị isi gbakọtara na ọdụ ụgbọ elu Sir Lynden n'ehihie a iji kelee ụgbọ elu ahụ na-emeghe na o gosipụtara okwu nnabata nke nnabata.
Ihe e dere ede site na Hon. Dionisio D'Aguilar, MP, Minista nke njem na njem ụgbọelu, na ndị isi Frontier Airlines n'oge emume maka Frontier Airlines ụgbọ elu mbido si Miami gaa Nassau.
“Enwere m nsọpụrụ na obi ụtọ na Frontier Airlines kpebiri iso ya Bahamas, ọkachasị n'oge a dị oke egwu, ka anyị na-aga n'okporo ụzọ nke mgbake njem na mweghachi akụ na ụba na-eso ajọ ifufe na-ebibi ihe na nso nso a, ọrịa COVID-19. Eji m ohere a nabata gị nke ọma ma gosipụta ezigbo ekele maka mmekọ gị. ”
Foto dị n'aka ekpe gaa n'aka nri na ọdụ ụgbọ elu Miami bụ Barry Biffle, Onye isi ala na onye isi ụgbọ elu Frontier Airlines, na Oriakụ Linda Mackey, Consul General nke Bahamas Consulate Miami. Rongbọ elu Frontier nyere Islands nke Bahamas onyinye nke ihe atụ nke ụgbọ elu Frontier Airlines na Islands nke Bahamas gosipụtara foto nke onye omenkà ama ama nke Bahammi, Jamaal Rolle sere.
Mgbakwunye nke Frontier Airlines na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-ebu ụgbọelu na-arụ ọrụ na Bahamas na-abịa n'ihi ngagharị na-aga n'ihu nke Ministri nke Tourism & Aviation na ndị mmekọ ụlọ ọrụ dị mkpa iji gbasaa ụgbọ elu gaa ebe ahụ. Nnukwu mmụba nke ikuku elu sitere na isi ahịa ahịa dị ka isi ihe dị mkpa na atụmatụ nke ministri maka mgbake njem.
“Frontier Airlines’ otutu ugbo elu kwa izu na-enye ume nke ikuku ohuru na onodu njem nlegharị anya anyi dika ikuku ikuku a na ejikota ebe anyi na-agha na South nke USA, tinyere Florida, ahia nke anyi na enweta kwa otutu ndi nleta anyi kwa afo. ”Kwuru Mịnịsta D'Aguilar.
Ọbịa ga-enwe ohere ịnụ ụtọ ọmarịcha osimiri ma chọpụta onyinye na-enye obi ụtọ nke Nassau na Paradise Island.
Nyochaa agwaetiti niile nwere inye https://www.bahamas.com/ ma ọ bụ na Facebook, YouTube or Instagram.